Breaking News : – Dawlada Mareykanka oo sheegtay in la ciqaabi doono Somaalida haysta dhalashada Mareykanka ee ku lug yeesha musuqmaasuqa Doorashada Somaaliya | puntlandi.com
Breaking News : – Dawlada Mareykanka oo sheegtay in la ciqaabi doono Somaalida haysta dhalashada Mareykanka ee ku lug yeesha musuqmaasuqa Doorashada Somaaliya
War ka soo baxay Safaarada Mareykanka ee Somalia ayaa lagu sheegay in dawlada
Mareykanku ciqaabi doonto muwaadinteeda ku lug yeesha hawlaha musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta ee laga wado doorashooyinka ka socoda Somalia.
Talabadan goodiga iyo digniinta ah ee Mareykanku soo saaray xilligan ayaa muujinaysa in ay faraha ka baxaday oo ay Fowdo iyo fashil Siyaasadeed ku socto dadaalkii loogu jiray in ay dalka ka dhacaan doorashooyin xor oo xalaal ah.
Waxaa aad isu soo taraya rajo la’aanta iyo saluuga laga qabo natiijada ka dhalan karta Musuqmaasuqa iyo Jahawareerka dalku ku jiro.
Sidoo kale xubnaha Beesha Caalamka ayaa maalintii shalay ka horyimid go’aankii madaxada madasha wadatashiga Qaranku si sharci daro ah ugu kordhiyeen tiradii Aqalka sare ee aheyd 54,kana dhigeen 72, talaabadaas oo gef iyo dhaawac ku ah shuruucada iyo Dastuurka dalka u yaal.
Sidoo kale lix musharax oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka ayaa maalintii shalay ugu baaqay Golaha Amaanka ee Jimciyada Quruumaha ka dhaxeysa in ay soo farageliyaan Musuqmaasuq iyo boobka doorashooyinka Somalia ee ay ku lug leeyihiin madaxada ugu sareeysa ee dalku
War qoraal ah oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee US Mission in Somalia ayaa u dhignaa sidan :